ပြန်လည်အကြောင်းပြရသည့်အကြောင်းရင်း ၁၃ ချက် - အပိုင်း ၂ - တိပ် ၁၊ ဘေးထွက်ခ - Netflix မူရင်း
ပြန်လည်သိမ်းယူရသည့်အကြောင်းရင်း ၁၃ ခု - အပိုင်း ၂ - 'တိပ်ခွေ၊ ဘေးဘက်ခ'
အကြောင်းပြချက် 13 အကြောင်းရင်း - ဓာတ်ပုံခရက်ဒစ် - Beth Dubber / Netflix
Netflix မှအကောင်းဆုံးဟာသတီဗီ - The Carmichael Show season 1-2 Jon Bernthal ကအပြစ်ပေးသူသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် Netflix သို့ရောက်ရှိလာသည်ကိုအတည်ပြုသည်
Netflix ၏မူလစီးရီး ၁၃ အကြောင်းရင်းဖြစ်သည့် Katherine Langford နှင့် Dylan Minnette တို့၏အပိုင်း (၂)၊ တိပ် (၁), ဘေးထွက် B ၏ပြန်လည်စုစည်းခြင်း။
၏ဤပြန်လည်စုစည်းမှု၌တည်၏ ၁၃ အကြောင်းရင်း အပိုင်းနှစ်, တိပ် 1, ဘေးထွက် B ကို, ငါတို့ဟန္န Baker ရဲ့ရိုင်းစိုင်းတဲ့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေတွေ့ဆုံရန်နှင့်သူမ၏သတ်သေမှု၏နောက်ဆက်တွဲပိုမိုရှုပ်ထွေးအသေးစိတ်လေ့လာသင်ယူ။
ဂျက်စီကာသည်ကျောင်းတွင်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောသူမရဲ့ချစ်သူရည်းစားဖြစ်သူ Justin Foley ရဲ့နေရာဘယ်မှာရှိသလဲဆိုတာကိုအနည်းငယ်သောကလေးငယ်များအားကင်ကျွေးနေသည်။ သတိရပါ, Justin တစ်မိနစ်နှင့်တစ်နှစ်ခွဲများအတွက်ဟန္နရဲ့ရည်းစားများနှင့်ကိန်းဂဏန်း uno အဘယ်ကြောင့်အကြောင်းပြချက်သတိရပါ။
RELATED - ရာသီ2သည် Netflix တွင်အဘယ်ကြောင့်အကြောင်းပြချက် ၁၃ ခုရှိလိမ့်မည်နည်း။
ဟန္နနှင့်ဂျက်စီကာ၏ပထမဆုံးအစည်းအဝေးမှ Flashback ။ ဂျက်ဆီကာသည်စစ်တပ်မိသားစုမှဆင်းသက်လာသူဖြစ်သည်။ သူမသည်မြို့သစ်နှင့်သူတို့၏ shared မိန်းကလေးအတွေ့အကြုံအသစ်များအပေါ်ဟန္နနှင့်အနှောင်အဖွဲ့ရှိသည်။ သူတို့နှစ် ဦး သည်မကြာမီတွင်သုံး ဦး ဖြစ်လာသည်။ သူတို့သည်အဲလက်စ်နှင့်မိတ်ဆွေဖြစ်ကြပြီးကျောင်း၌အသစ်ဖြစ်နေသောကောင်လေးဖြစ်သည်။ FML Forever သည်သုံးဆောင်၏ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်လာသည်။
ဂျက်စီကာနှင့်အဲလက်စ်သည်တိတ်တဆိတ်ချိန်းတွေ့သည်အထိအားလုံးကောင်းသည်။ ဟန္နသည်အဖြေရှာရန်ခက်ခဲသည်။ နောက်ဆုံးတော့အဲလက်စ်ဟာဂျက်စီကာနဲ့ပြိုကွဲသွားပြီးသူဟာဟန္နကိုလှည့်စားနေတာကြောင့်လို့ထင်ပါတယ်။ ဒါက sluts လုပ်ပေးသောကြောင့်, သူမသူမ၏ရင်ဆိုင်နှင့်မျက်နှာဖြတ်ပြီးတစ် ဦး ကိုက်ရိုက်ပုတ်ကယ်တင်သောအခါ, ဂျက်စီကာကပြောပါတယ်။
netflix လာမယ့် Outlander ရာသီ3အခါ
ကျောင်းသို့ပြန်လာလျှင်ယခုအချိန်တွင် jocks များသည်တစ်စုံတစ်ခုကိုပုန်းလျှိုးကွယ်လျှိုးလုပ်နေကြသည်။ Justin မြင့်မားလာပြီနှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းကစား, သူ့ buddy Bryce ရဲ့ရေကူးကန်အိမ်တော်၌တက် holed ဖြစ်ပါတယ်။ အခြားအသင်းဖော်နှစ် ဦး ဖြစ်သော Marcus နှင့် Zach တို့က Justin ကိုသူနှင့်သူကိုယ်တိုင်နှင့်သူကိုယ်တိုင်အာရုံစိုက်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း Justin အားသတိပေးခဲ့သည်။ ထို့နောက် Justin ၏သူငယ်ချင်းများက Clay ကိုသူတို့၏အိမ်တွင်လာရောက်စည်းရုံးသည်။ သူတို့တစ် ဦး ချင်းစီကတခြားအနိုင်နိုင်အရင်ကစကားပြောခဲ့ကြပြီးကတည်းကနှင့် Clay သဘာဝကျကျဒီသံသယရှိသူကိုတွေ့။
Justin ကိုသူတွေ့တဲ့အချိန်မှာဂျက်စီကာကမထင်မှတ်ပဲထွက်နေတုန်းပဲ။ သူမသည် Clay သည်တိပ်ခွေများနားထောင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်စိတ်ပူသည်။ Justin သည်သူမဟန္နလိမ်သည်ဟုထင်သည့်လုပ်ရပ်နှင့် ပတ်သက်၍လည်း ထပ်တူထပ်မျှစိုးရိမ်မိသည်။ ဇာတ်လမ်းတွဲ ၁ တွင်ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာခဲ့သောမသင့်လျော်သောဓာတ်ပုံဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်ထင်သည်မှာထိုအရာသည် ပို၍ ဖြစ်သည် လမ်း ရွှံ့စေးကတစ်ယောက်ယောက်ကိုတစ်ခုခုပြောနေမှာကိုအရမ်းစိတ်ပူခဲ့တယ်။ ကျနော်တို့ထွက်ရှာရန်လိုအပ်ကြောင်းဟန္နရဲ့ဇာတ်လမ်းအများကြီးအများကြီးသိသာရှိပါတယ်။
ပြီးတော့တိုနီရှိပါတယ်။ သူကအခုငါ့စိတ်ထဲမှာအကြီးမားဆုံးမေးခွန်းအမှတ်အသားပါပဲ။ သူကရွှံ့စေးကျော်ကြည့်နေတယ်။ သူကပွေ့ဖက်နှင့်ဆွေးနွေး, ဟန္နရဲ့မိဘများနှင့်အတူအစည်းအဝေးများရှိခြင်းရဲ့။ ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကို၌သူ၏အခန်းကဏ္ exactly အတိအကျကဘာလဲ? တိုနီသည်သင်၏ပျမ်းမျှဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အတွက်ရင့်ကျက်လွန်းသည်ဟုထင်ရသဖြင့်သူနှင့်ပိုတူသည်ဟုကျွန်ုပ်ခံစားမိသည်။ သူ၏ဇာတ်လမ်းလိုင်းသည်တိပ်ခွေများ၏အုပ်ထိန်းသူကိုကျော်လွန်ပြီးဖွံ့ဖြိုးမပါကကျွန်ုပ်အနည်းငယ်စိတ်ပျက်မိပါလိမ့်မည်။
တိုနီကသူကသေးတိပ်ခွေကိုနားထောင်ရန်အနှေးဆုံးဖွင့်မယ့်ရွှံ့စေးကိုပြောပြသည့်အခါဒါပေမယ့်ကောင်းပါတယ် (ဟုတ်တာပေါ့??) ။ Clay ကသူ့စကားကိုနားထောင်ရန်ခက်ခဲသည်ဟုပြောသောအခါအနည်းဆုံးကျွန်ုပ်တို့ရှင်းပြချက်အနည်းငယ်ရကြသည်။
ဒါကြောင့်ဒီမေးခွန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဂျက်စီကာနဲ့ဂျတ်စ်တာဘာတွေပုန်းနေသလဲ။ တိုနီရဲ့အရာအားလုံးကိုကောင်းစွာနှင့်အတူသဘောတူညီချက်ကဘာလဲ? အဘယ်ကြောင့် OH အဘယ်ကြောင့်၊ ရွှံ့စေးသည်တိပ်ခွေများကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာနားမထောင်ရသနည်း။